Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo qiray in habacsanaan ka jirto sugida Amniga Muqdisho – STAR FM SOMALIA
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir oo qiray in habacsanaan ka jirto sugida Amniga Muqdisho
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa qiray in habacsanaan dhinaca amniga ah ay ka jirto magaalada Muqdisho, isagoo xusay inuu aaminsan yahay inay hagar ku jirto qaabka sugida amniga.
Kulan xasaasi ahaa oo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir la yeesheen qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha degmooyinka Bartamaha Muqdisho ayaa looga hadlay sida wada shaqeyn u dhex mari karto Guddoomiyeyaasha iyo Taliyeyaasha saldhigyada.
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa sheegay in loo baahan yahay in Guddoomiyaha degmada, Kuxigeenkiisa, Laanta, Waaxda iyo Saldhiga aysan jirinw ada shaqeyn dhab ah oo ka dhaxeysa, taas ayuu ku sababeeyay inay ka qeyb qaadaneyso habacsanaanta.
Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa caddeeyay in Guddoomiyihii ka soo bixi waayo howshaas uu xilkiisa ku waayi doono, isla markaana xil ka qaadis lagu sameyn doono.
Waxaa uu sheegay in loo baahan yahay inuu xiriir dhex maro Guddoomiyeyaasha degmooyinka deriska ah, isla markaana ay is weydaarsadaan xogaha, waxaana uu intaa ku daray hadii wada shaqeynta ay joogto noqoto ay meesha ka bixi doonto habacsanaanta.
Taliyaha Booliska Gobolka Banaadir Col. Bishaar Abshir Geeddi ayaa qiray in aysan jirin wax wada shaqeyn ah oo u dhaxeysa Guddoomiyaha degmada iyo Taliyaha Saldhiga Booliska, isagoo xusay in qaladaadka jira ay ka mid tahay.
Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa faraha ka sii baxayay muddooyinkii u dambeeyay, iyadoo ay kordheen weerarada Al-Shabaab geysanayaan.
Meydka Muwaadin Somaliyed oo laga helay Jazeerada Tromso ee dalka Norway
C/weli Gaas oo si kulul u weeraray Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud